20/05/2022 - 05:41:35 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
19/05/2022 - 18:04:41 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
19/05/2022 - 17:57:09 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wasiirka amniga dowladda Federaalka iyo ciidamo uu wato ayaa maanta tagay xarunta Bankiga dhexe ee magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku keydsanyihiin lacago malaayiin doollar ah.
19/05/2022 - 17:30:50 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
19/05/2022 - 11:31:00 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Xoogag jihaadi ah ayaa xalay weeraro culus ku qaaday saldhigyo ay ciidamada dowladda Federaalka uga sugnaayeen magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
18/05/2022 - 21:37:24 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
18 May, 1991-kii ayaa maamulka Somaliland ku dhawaaqay in uu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale.
18/05/2022 - 19:06:21 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
Faahfaahin ayaa laga qarax xoogan oo todobaadkan gudahiisa ciidamo ka tirsan Xabashida lagula eegtay deegaan lagu magacaabo Maareey oo qiyaastii 30km u jira degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool.
18/05/2022 - 18:34:45 Wararka Gudaha Warsame Warfaa
18/05/2022 - 14:36:05 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobollada waqooyi Bari Soomaaliya ayaa sheegaya in isbedel dhanka maamulka ah uu ka dhacay mid kamida degmooyinka gobolka Sool.
18/05/2022 - 14:21:57 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
18/05/2022 - 13:13:01 Wararka Gudaha
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dilal qorshaysan oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay xaafado katirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Turkiga oo gaashaanka u daruuray dalabkii Finland iyo Sweden ee ku biiridda NATO.
18/05/2022 - 11:04:44 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Madaxweynaha Turkiga iyo xukuumaddiisa ayaa diiddey dalabkii labada dawladood ee Finland iyo Sweden kaas oo ay ku rabeen in ay xubno ka noqdaan Gaashaanbuurta NATO. Turkiga ayaa weli ah dawladda keliya ee sida rasmiga ah uga soo horjeesatay dalabkan.
18/05/2022 - 10:04:49 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Jamaal Cusmaan oo ah wariye ka tirsan TV-ga Channel 4 oo dhawaan booqday deegaanada ay ka arimiso Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegay inuu aad ula dhacay nolosha barwaaqada iyo hormarka leh ee ka jirta magaalooyinkii uu soo maray, isagoo sheegay in Xarakada Al-Shabaab ay gacanta ku heyso dhulka…
17/05/2022 - 15:29:04 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
17/05/2022 - 13:51:16 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax khasaara dhaliyay oo ka dhacay gudaha degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe.
17/05/2022 - 12:24:50 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegaya in weerar lagu qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo katirsan maamulka 'Puntland'.
17/05/2022 - 12:20:57 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dowladda Maali oo fashilisay Afgambi melleteri saacado kadib markii ay ka baxday isbahaysiga G5.
17/05/2022 - 09:57:08 Wararka Gudaha
Wararka ka imaanaya dalka Maali ayaa sheegaya in lafashiliyay inqilaab melleteri oo ladoonayay in lagu rido xukuumadda ay madaxda ka yihiin saraakiisha ciidanka.
16/05/2022 - 16:35:22 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamada shisheeyaha lagu gaarsiiyay weeraro toos ah iyo qaraxyo lagula beegsaday deegaanno dhaca Koonfurta Soomaaliya.
16/05/2022 - 15:35:10 Wararka Gudaha Liibaan Jeexoow
Dhinacyada isku haya siyaasadda dalka Itoobiya ayaa si diirran usoo dhoweeyay doorashadii madaxtinimada Soomaaliya iyo guushii uu gaaray Xasan Sheekh Maxamuud.